Incorporation နှင့် LLC Business Formation Packages များကိုဒေါ်လာ ၉၉ ဖြင့်စတင်သည်
ထံမှဝဘ်ပေါ်နှင့်တိကျသောဖွဲ့စည်းရေးဝန်ဆောင်မှု ရုံ $ 149
Package တွင်ပါ ၀ င်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
အမည်ရှာဖွေခြင်း / ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်း။
Rapid Filing Service - စာရွက်စာတမ်းများကိုတစ်ညလုံးတင်ပြီးအစိုးရသို့လက်သို့ပို့သည်
S-Corp ရွေးကောက်ပွဲပုံစံ (၂၅၅၃)
EIN အခွန် ID လျှောက်လွှာ (SS4)
Service Package စျေးနှုန်းများကိုထည့်သွင်းပါ $399 $279 $149
ပြည့်စုံသည် ပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုစျေးနှုန်းများနှင့် ပြည်နယ်ဖြည့်စွက်အခကြေးငွေကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုပါ။
အခြေခံမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု (ငွေထုပ်)
Basic Incorporation အဆင့်တွင်ပင်၊ CompaniesInc.com သည် ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနှင့်တိကျမှန်ကန်သောကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒေါ်လာ ၁၄၉ နှင့်ပြည်နယ်အခကြေးငွေအတွက်သာပေးသည်။ ဤအထုပ်သည်သင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးကိုစနစ်တကျထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်နိမ့်ဆုံးကိုပေးထားသည်။ သင်ထည့်သွင်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားလိုပါကကောင်းမွန်သော“ starter” package တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအထုပ်၏ပါ ၀ င်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
သာ $ 149 ပေါင်းပြည်နယ်အခကြေးငွေ
ပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းအထုပ် (Gold Package)
၎င်းသည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပိုမိုပြည့်စုံစွာချဉ်းကပ်လိုသောလုပ်ငန်းရှင်နှင့် / သို့မဟုတ်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်အတွက်အထုပ်ဖြစ်သည်။ Basic Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်၊
သာ $ 279 ပေါင်းပြည်နယ်အခကြေးငွေ
နာမတော်ကိုရည်ညွှန်းသကဲ့သို့, ဒီအထုပ်ထဲမှာအားလုံးပါဝင်သည်! ဤသည်မှာသူ၏စီးပွားရေးကိုနောက်အဆင့်သို့တက်လိုသောလေးနက်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ ဤအထုပ်သည်နေ့ချင်းညချင်း (သို့) လက်သယ်ဆောင်ရန်စာရွက်စာတမ်းတင်ခြင်းမှသည်သင့်လျော်သော S-Corp နှင့် EIN ရွေးကောက်ပွဲနှင့်လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများအထိအခြေခံများအားလုံးအကျုံးဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားအပိုဆောင်း features တွေဖြစ်ကြသည်:
သင့်ထံ FedEx Delivery
S-Corporation ရွေးကောက်ပွဲပုံစံ (၂၅၅၃)
EIN အခွန် ID နံပါတ် (SS4)
Entity (Tax) အမျိုးအစား (8832)
သင်၏ဘဏ္Castleာရေးရဲတိုက် e-Book ကိုတည်ဆောက်ပါ
သာ $ 399 ပေါင်းပြည်နယ်အခကြေးငွေ
သင်၏ရွေးချယ်သောပြည်နယ်အတွင်းအမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း - သင်ပါဝင်လိုသောပြည်နယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးသည့်နောက် (ပြည်နယ်ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောအဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏“ မည်သည့်ပြည်နယ်တွင်ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းသင့်သည်” စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ) သင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှစ်သက်သောနာမည် ပေး၍ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလိမ့်မည်။ သင်၏အမည်ကိုရရှိနိုင်မလားသိရန်ပြည်နယ်ဒေတာဘေ့စ်ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ။ သင်၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုမရရှိနိုင်ပါကသင်နှစ်သက်သောအမည်တစ်ခုတင်သွင်းရန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ရေးဆွဲခြင်း - ပြည်နယ်များအားလုံးသည်“ စာရင်းသွင်းခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ” ကိုသင့်လျော်သောပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးရုံးသို့တင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်အားတရားဝင်“ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းခံရသည်” ဟုကမ္ဘာကိုကြေငြာသည်။
သင်ရွေးချယ်သောပြည်နယ်နှင့်အတူဖိုင်တွဲများ ကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းချက် - သင်ထည့်သွင်းမည့်ပြည်နယ်ကိုသင်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပြီးနောက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်နှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုတင်ပြသည်။
Priority Mail မှတစ်ဆင့်ပေးပို့မည့်စာရွက်စာတမ်းအထုပ် - ကျွန်ုပ်တို့၏စာတိုက်မဟုတ်သောစာပေးစာယူအားလုံးကို US စာတိုက် ဦး စားပေးဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှု: ပြည်နယ် ၅၀ မှအများစုသည်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်ကော်ပိုရေးရှင်းများ (သို့) LLC အားလုံးအတွက်ဖိုင်တွဲထားရန်လိုအပ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်သည်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံပြီးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် LLC အားလုံ့လဝီရိယရှိရှိဖြင့်ကူညီရန်နှင့်ကုမ္ပဏီကိုကောင်းမွန်သောအနေအထားရှိစေရန်အတွက်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုတင်သွင်းကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်သည်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ၌ရက်သတ္တပတ် ၉ ရက်မှညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်နယ်ငါးဆယ်နှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားနေရာများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
မရှိမဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းဤစာရင်းသည်ရွှေအလေးချိန်နှင့်ထိုက်တန်သည်။ သင့်အားသင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းကိုကျန်းမာစေရန်၊ လည်ပတ်စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်“ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော” စာရင်းတစ်ခုပေးသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းမှသည်သင်၏အခွန်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များ (EIN, S-Corporation, စသည်တို့) အတွက်သင့်လျော်သောပုံစံများကိုသိရန်သေချာစေရန်၊ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏လည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လျှင်ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော Corporate Kit: သင်၏တရား ၀ င်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုစနစ်တကျစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စုံလင်သောကော်ပိုရိတ်ကိရိယာများကိုသင့်အားပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာအစုံအလင်ကိုကောင်းစွာစဉ်းစားထားပြီးသင်၏မူလသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုထားသောမိတ္တူများဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်မှတ်တမ်းများ၊ နှင့် IRS ပုံစံများ၊ လက်လှမ်းမှီ၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ကော်ပိုရိတ်ပစ္စည်းများသည်ကျောရိုးတွင်ရွှေဖြင့်စည်းထားသောသင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏နာမည်နှင့်အတူလှပသောမှောင်မိုက်အဖုံးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းတံဆိပ်နှင့်သင်၏တရားဝင်ကော်ပိုရေးရှင်းတံဆိပ်ပါ ၀ င်သည်။ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏အမည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်နေ့စွဲ၊ ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ ကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းများ၊ ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၊ မှတ်ပုံတင်၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်သဘောတူစာချုပ်များ၊ တစ် ဦး ကအမှန်တကယ်ပြည့်စုံကိရိယာအစုံ!
Rapid စာရွက်စာတမ်းဖိုင် သင်ပလက်တီနမ်အထုပ်နှင့်အတူသင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏ဖြည့်သွင်းမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်လက်ဖြင့်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်နေ့ချင်းညချင်းအမြန် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသေချာစေမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏“ Rapid Document Filing” ဝန်ဆောင်မှုပါဝင်သည်။
S-Corporation ရွေးကောက်ပွဲပုံစံ - သင်သည်သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းကိုခွဲခြားရန်ဆန္ဒရှိပါက (ဤအခွန်အဆင့်အတန်းအတွက်အချိန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များရှိပါက) S Plugum Package တွင် S-Corporation Election Form (IRS Form 2553, Sub အခန်း S ကော်ပိုရေးရှင်း) လည်းပါဝင်သည်။ ငါတို့သည်လည်း S-Corporation ရွေးကောက်ပွဲလျှောက်လွှာအကူအညီ, ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖြည့်စွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းပြင်ဆင်မှုအတွက်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
EIN အခွန် ID နံပါတ်: ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်၊ ၀ န်ထမ်းငှားရမ်းရန်၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၏နာမ၌အရင်းအနှီးများ ၀ ယ်ရန်စသည်တို့ကိုသင်မျှော်လင့်ထားပါကဖက်ဒရယ်အလုပ်ရှင်ဖော်ထုတ်ရေးနံပါတ် (EIN) လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်တီနမ်အထုပ်တွင် EIN အတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုပါရှိပြီးမြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးသည်။ အပိုဆောင်းဒေါ်လာ ၇၅ ဒေါ်လာ၊ သင့်ကို ၂၄ နာရီအတွင်းသင်လျှောက်လွှာကိုကူညီပေးနိုင်သည်၊ ဖိုင်တင်ရန်နှင့် EIN ရရှိနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း (အခွန်) ခွဲခြား: EIN နံပါတ်အပြင်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်အခွန်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ (များ) မှသီးခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသည် IRS နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးဤပုံစံကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ကူညီနိုင်သည် - ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုများနှင့်ပြောဆိုပါ။
တိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူအခမဲ့ Registered အေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှု
CompaniesIn ကော်ပိုရေးရှင်းအသစ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအထုပ်အသစ် * တိုင်းတွင်အခမဲ့ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်
ဌာနေကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကဘာလဲ။
ပြည်နယ်အားလုံးနီးပါးတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် LLC သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုသတ်မှတ်ပေးရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်တရားဝင်လိုအပ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်သည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာရှိရမည် -